Methenolone Acetate (Primobolan) powder (434-05-9) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Anabolics Steroids / Methenolone powder Series / Methenolone Acetate (Primobolan) powder
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika pakukura kwe Methenolone Acetat (Primobolan) powder (434-05-9), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Methenolone Acetate (Primobolan) powder video
Raw Methenolone Acetate (Primobolan) powder basic Characters
Name: Methenolone Acetate (Primobolan) powder
Raw Methenolone Acetate (Primobolan) kushandiswa kwehushoni mu steroid cycle
Methenolone Acetate powder inozivikanwa sePomobolan powder (CAS 434-05-9), Primo A, Primo Ace.
Methenolone Acetate powder inofanira kunge isina kukuvara. Kumurume, anotanga kazhinji kutora 50-100mg pazuva, Mukati wevashandi anowanzozotora100-150mg zuva, uyo anoshandisa yakashandiswa kazhinji anotora 150-200mg pazuva, kwete kupfuura 6-8 vhiki, Kwavakadzi, kazhinji 25-50mg kana 50 -75mg zuva. Uye hapana mavhiki anopfuura 4-6,
Warning on Raw Primobolan powder
Kunyange zvazvo steroid ine unyoro, madhara ematenolone Acetate powder anogona kusanganisira zvakasimba, zvakashata uye androgenic reactions. Uyerogenic nemigumisiro inosanganisira acne, kukurumidza kutsvaira bvudzi mune izvo zvakagadzirirwa kumurume kuchena kwemuenzaniso uye kuveura bvudzi.
Inosanganisirawo nyaya dzeku cholesterol, sekuwedzera kweLDL cholesterol, kunyanya HDL cholesterol kuderedza kana kuderedza.
Uyezve, dzose vanabolic steroid inodzvinyirira chibereko che testosterone Kunyange zvazvo inoderedza hutachiona hwekupupurira testosterone, Methenolone Acetate powder (CAS 434-05-9) chirwere chekuderedza hachisi chakasimba pane vazhinji vanabolic steroid.
Mukati rehutano, Methenolone Acetate powder inoshandiswa kurapa vanhu vanotambura nemamiriro ezvinhu umo kusvibiswa kwemasumbu uye kuora kurasikirwa kwechiremera chiratidzo. Zvimwe zvinosanganisira zvinosanganisira: immunostimulant kune vanhu vanorwisana nehutachiona, kuparadza mamiriro ezvinhu, kugadzirisa kurwisana nemigumisiro yenguva refu yekuroticosteroid therapy, uye kurapa kweasteoporosis uye sarcopenia (kurasikirwa kwemisumbu sekuenzanirana nekukwegura). Methenolone Acetate powder, kufanana neAnavar, yakaratidzwa kuva munyoro mune zvakaipa zvayo iyo yakashandiswawo kuvana pamwe chete nechecheche kuitira kuti kukurudzira uremu muvana vasati vaberekwa vasina zviratidzo zvekukanganisa kana chepfu  . Mumwe anogona kuona nyore nyore kuti kunakirwa kweiyi anabolic steroid inobva mukati memauto emitambo uye ekugadzirisa muviri, sezvo iri chimiro chinoratidza maitiro asina simba uyerogenic ane zvishoma zvisingabatsiri.
Nzira yekutenga Methenolone Acetate powder (CAS 434-05-9), kutenga Primobolan powder kubva kuAASRAW
KUNYANYA kunopa kuchena 98% Methenolone Acetate poda yakasvibirira kuti vashandise muviri kana pasi pemvura pasi pemvura.
Methenolone Acetate powder Raw Powder Recipes
Primobolan powder - yakanakisisa kuderedza steroid